Maungtintyin: အကျိုးတရားက ဘယ်လိုသက်ရောက်ပါစေ အကြောင်းမဟုတ်ပါ- ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို မွေ့ လျော်ပါ
အကျိုးတရားက ဘယ်လိုသက်ရောက်ပါစေ အကြောင်းမဟုတ်ပါ- ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို မွေ့ လျော်ပါ
အကျွန်ုပ်တို့မှာ အလှိုဆန္ဒများစွာနဲ့ရည်မှန်းချက်များစွာ ရှိကြပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ လိုချင်တဲ့အရာကို အမြဲတမ်း အကျွန်ုပ်တို့ မရကြပါ။ အကျွန်ုပ်တို့ထဲမှ အချို့က အကျွန်ုပ်တို့ရရှိတဲ့အရာနဲ့ ပျော်ရွှင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့သူများကတော့ မကျေနပ်မှုများ- အာသာဆန္ဒမပြည့်မ၀မှုများဖြင့် ဆက်လက်တည်ရှိနေကြပါတယ်။ အချို့သူများက မစွန့်လွှတ်နိုင်ကြသေးပေမယ့် သူတို့ဟာ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ဘယ်ချဉ်းကပ်မှုက မှန်ကန်တဲ့ ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါသလဲ?
အကျွန်ုပ်က အခြားချဉ်းကပ်မှုကို အကြံပြုပါ့မယ်။ သင်ဟာ အလိုဆန္ဒတစ်ခု ရှိနိုင်တယ်။ အဲဒါကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားအားထုတ်မှုကို စိုက်ထုတ်ပါ။ အချိန်ပေးပါ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ အကျိုးတရားထက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ လုံးလ၀ီရိယဖြင့် သင့်ကို အမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်အောင် ပြုလုပ်ပါ။
ညည်းညည်းညူညူ မကျေနပ်စွာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို ပြုလုပ်ပြီး အလိုဆန္ဒများ ရရှိတဲ့အခါမှသာ ပျော်ရွှင်တဲ့သူများ ရှိပါတယ်။ သူတို့မှာပြင်းပြတဲ့စွမ်းပကားမရှိ ဒါမှမဟုတ် စိတ်အားတက်ကြွထက်သန်မှုက အကျိုးအမြတ် ရလဒ်မှာ ပျော်ရွှင်ဖို့ ကျန်ရစ်နေတဲ့ ချန်ထားရစ်တဲ့ - ဤသို့သော အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွက် ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သူတို့ကိုယ်ကိုယ်သူတို့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေတဲ့သူများရှိပါတယ်။ အကျွန်ုပ်ရဲ့ နည်းလမ်းကတော့ - ဘယ်လိုအကျိုးတရားပဲ သက်ရောက်သက်ရောက် အကြောင်းမဟုတ်ပါ- ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို မွေ့ လျော်ပါ- ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အကျွန်ုပ်ရဲ့ ချဉ်းကပ်မှုဟာ သွားရမည့်ရည်မှန်းချက် နေရာဆီသို့ ချီတက်သည့်ခရီးကို တက်ရောက်ဖို့ ပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ရောက်ယင် အကျွန်ုပ်တို့ ပျော်ရွှင်ပါတယ်။ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်သို့ မရောက်ယင်တောင် ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ပြိုင်ပွဲကို ၀င်ပြိုင်ရခြင်းမှာ ရင်ဖိုရခြင်း ပီတီဖြစ်ရခြင်းရဲ့ ခံစားမှုကို ယူငင်နိုင်ပါတယ်။ ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းတဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းလျမှုက ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံး ခံစားသိမြင်စေပါတယ်။ အကျွန်ုပ်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုများဟာ ပန်းတိုင်တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိခြင်းမှ ဆင်းသက်လာတာ မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် အကျွန်ုပ်ဟာ အဲဒါကို အကျွန်ုပ်ရဲ့ကြိုးစားမှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ အပတ်တကုတ် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုမှ ဆင်းသက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခု အကျွန်ုပ်ဟာ သင့်ကိုပြောဆိုခြင်းဖြင့် တိုက်တွန်းပါတယ်။ အကျွန်ုပ်ဟာ အကျွန်ုပ်ရဲ့ သင်ကြားမှုကို နိဂုံး ချုပ်ပြီးဆုံးတဲ့အခါ - သင်က အကျွန်ုပ်ကို တဖြောင်းဖြောင်းမြည်တဲ့သြဘာကို ပေးမှသာလျင် အကျွန်ုပ်ဟာ ပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားရလိမ့်မယ်လို့ ဆိုကြပါစို့။ ဒါက အကျွန်ုပ်ဟာ အကျွန်ုပ်ရဲ့သင်ကြားမှုမှာ ပြည့်ပြည့်၀၀ ပျော်ရွှင်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ တကယ်တမ်းအတိအကျဆိုရရင်တော့ အကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ဟာ သီးသန့် တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်တဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုကို ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ တကယ့်ဒီနှီးနွှယ်ဆက်စပ်မှုက အကျွန်ုပ်ရဲ့ သင်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ အကျွန်ုပ်ရဲ့အကောင်းဆုံးကို ပေးခြင်းမှ အကျွန်ုပ်ကို တားမြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒါဟာ ပန်းတိုင်သို့ အကျွန်ုပ်ရဲ့ရောက်ရှိမှုအတွက် အဟန့်အတားတစ်ခုလို ပြုမူပါတယ်။
ဘောလုံးကို ကစားခြင်းဟာ ပျော်ရွှင်မှုရဲ့အမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်နိုင်ခြင်းကတော့ အခြားအမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာက အောင်မြင်မှုဖြင့် ပျော်ရွှင်မှုကို အကျွန်ုပ်တို့ဟာ တစ်ခုတည်းလက်ခံ တန်းတူသဘောထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အတီးအမှုတ်များကို သူတို့ရဲ့ဖျော်ဖြေရေးတင်ဆက်မှုပွဲမှာ ဆွဲဆောင်ထားပါတယ်။ ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။ အားလုံးမှာ တကယ့်လက်တွေ့ကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သူတို့ဟာ ပရိသတ်ကို သတိမထားမိပါ။ အထွတ်အထိပ်ဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာ အဆင့်မှာ လက်ခုပ်သြဘာသံများကို သတိမထားမိပါ။ ဒါပေမယ့် အဆုံးမှာ စီစဉ်သူ စည်းရုံးရေးမှုးများထံမှ လက်ခံရရှိလိမ့်မှာဖြစ်တဲ့ ငွေကြေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာဟာ သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ သူတို့ရဲ့ ဖန်တီးမှုကို သယ်ဆောင်ရာမှာ သူတို့ရဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်မှုများ ဖြစ်ပါတယ်။ သြဘာပေးခြင်းရဲ့အသွင်အပြင်မှာ- ငွေရခြင်းရဲ့ပုံစံမှာ နောက်ဆုံးအကျိုးဆက် ရလဒ်မဟုတ်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပျော်ရွှင်ပါ။ ရွေ့လျားနိုင်စွမ်းပမာဏကို ပျော်ရွှင်ပါ။ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို ပျော်မွေ့ ပါ။
သင့်ဟာ ချောချောမောမောဖြစ်အောင် အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာ- ကြိုးစားပမ်းစားလုပ်ယုံမျှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ရေချိုးကန်မှာ ငါးမဖမ်းပါနဲ့။ ပြေးလွှားစီးဆင်းနေတဲ့စမ်းချောင်းမှာ ဆပ်ပြာမြှုပ်ကို အမြှုပ်ထများပြားလာဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ အဲဒီအစား စမ်းချောင်းမှာ ငါးဖမ်းပါ။ ရေးချိုးကန်မှာ ဆပ်ပြာမြှုပ်ကို အမြှုပ်ထအောင် ပြုလုပ်ပါ။
သင်ရဲ့ပန်းတိုင်ကို ချင့်တွက်ပါ။ ပန်းတိုင်များသို့ရောက်ရှိရာမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတဲ့ လုံးလကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုရဲ့ အရေအတွက်နဲ့အရည်အသွေးကို အကြမ်းဖျင်းခန့်မှန်းပါ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ ပြန်လာမယ့်အရာ အတိုင်းအတာပမာဏကို ဂရုတစိုက် တွက်ချက်ပါ။ အဲဒီနောက် အချိုးအစားက သင်ကျေနပ်ဖွယ်ရာအဖြစ် လက်ခံယုံကြည်လျင် သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်ဆီသို့ ဆက်သွားပါ။ သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များဆီသို့ ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားပါ။ ဒါဟာ ချောချောမောမောဖြစ်အောင် အလုပ်လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသိညဏ်နှင့်ယှဉ်တဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု ဖြစ်ပါတယ်။
ကျရှုံးခြင်းဟာ ဘ၀ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ အားကစားမှာလို အများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့ အခြေအနေများမှာ တစ်ဖက်ဖက်က ရှုံးကိုရှုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အောင်မြင်မှုမှာ ပျော်ရွှင်မြူးထူးတာထက် ဒါမှမဟုတ် ကျရှုံးမှုမှာ ငေးငိုင်မှိုင်တွေနေတာထက် သင့်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမှာ ဘာ့ကြောင့် မပျော်ရွှင်နိုင်ရတာလဲ?
ဆုံးရှုံးသွားတာကို တနုံ့နုံ့စဉ်းစားနေတာထက်- ကောင်းမွန်သင့်တော်တဲ့အောင်မြင်မှုမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့အတွက် - အဲဒါဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းနာများက အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ အကျွန်ုပ်ထင်ပါတယ်။ အများနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို ဘယ်သူ့ကိုဖြစ်ဖြစ် နောက်ထပ်ဆက်လက်ဆန္ဒပြုချင်တာကတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ မဟာဗျူဟာအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ကျရှုံးမှုတိုင်းမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာတစ်ခုလည်း ရှိပါတယ်။ ကျရှုံးမှုတိုင်းဟာ သူတို့ရဲ့သဘောသဘာဝဖြစ်တဲ့ လူသားရဲ့အားနည်းချက်များအတွက် လူများကို သတိပေးဖို့ မဖြစ်မနေမရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ အောင်မြင်မှုရဲ ပြတ်သွားခြင်းမရှိတဲ့ ကြိုးတစ်ချောင်းဟာ ပလွှားမှု မာန်မာနကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မြင့်မြင့်မားမား အောင်မြင့်သူများမှာ မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မကျော်လွှားနိုင်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ပါသေးတယ်။
အချို့နပန်းလက်ဝှေ့စတဲ့အားကစားစတားတွေ ပြောဆိုတဲ့ “ငါဟာ အထူးချွန်ဆုံးသူ” ဆိုတဲ့ ကြွားလုံး လေလုံး ထွားမှုတွေကို သတိရပါ။ တွေ့ နေကျ ပြောနေကျ ဆိုရိုးကို သွားရောက်တဲ့အခါ ဤသို့သောမာန်မာနများက ကြီးမားတဲ့ကျရှုံးခြင်းတစ်ခုရဲ့ ရှေ့ဦးအလျင် ကျရောက်နေပါတယ်။
ဘုရားသခင်အတွက် ကျေးကျွန်အဖြစ် ခံယူခြင်းဟာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အပြုအမူတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျေးကျွန်အဖြစ် ခံယူခြင်းဟာ လူသားများရဲ့စိတ်နှလုံးသားမှာသာလျင် ဖြစ်ပျက်ပါတယ်။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Thursday, January 20, 2011